Nyi Nyi Latt: Remove Facebook Timeline for yourself
Facebook ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ Profile ကိုပြန်ပြီး ပြောင်းလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုတော့
ပြောင်းလို့ရပါတယ် ဆိုလိုတာက သူများတွေကြည့်ရင်တော့ ကိုယ် Profile က Timeline ဖြစ်မယ် ဒါပေမဲ့
ကိုယ်ကြည့်ရင်တော့ အရင်က profile ပုံဖြစ်ပါမယ်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့
1. Google Chrome browser အသုံးပြုရမယ် မရှိရင် ဒီမှာယူပါ။
2. address bar ဘေးနားက ဂွလေးကိုနှိပ်ပါ။
3. ပြီးတော့ Extension ကိုနှိပ်ပါ ပြီးတော့ more extension ကိုနှိပ်ပါ။
4. search extension မှာ Timeline remove ကိုရှာလိုက်ပါ (သို့မဟုတ်)
အပေါ်ဆုံးက TIMELINE remove ကို add to Chrome လုပ်လိုက်ပါပြီးတော့
ကိုယ့် profile ကိုပြန်သွားလိုက်။
အရင်က profile ပုံကိုပြန်ရပါလိမ့်မယ်။